Haruki Murakami, munyori wechiJapan wekushuvira uye anotengesa zvakanyanya | Zvazvino Zvinyorwa
Haruki Murakami ndiye anonyanya kuzivikanwa munyori wechiJapan mupasi nhasi. Tiri kutaura nezvemunyori anotengesa zvakanyanya muhuwandu hwakazara hwetemu. Akanyorwa senge surrealist, kunyangwe iye akaedza kanopfuura kamwe neichoicho. Iko kusanganiswa kweWestern maficha ane hunhu hweiyo Japan idiosyncrasy chikamu cheakewo maitiro.
Kusurukirwa, kushushikana uye rudo ndidzo dzimwe dzemisoro yake inodzokororwa. Yunivhesiti yavo inoenda kubva kunzvimbo dzinodzvinyirira - dystopias, mune zvinyorwa zvinyorwa - kune imwe tariro ine tariro. Saka, yave kuzivikanwa pamwe mibairo yakawanda munzira dzayo dzese. Uyezve, vaverengi vake vanonyanya kufarira gore negore vanogunun'una kuti haasati azivikanwa neNobel Prize yeMabhuku.
1 Kubva kuKyoto kuenda pasirese
2 Nostalgia mubasa raHaruki Murakami
2.1 Muenzaniso: Kafka paMahombekombe
3 Pamberi uye shure kweTokyo Blues
4 Munyori anoshungurudza?
5 Mazhinji mafeni uye yakaenzana nhamba yevavengi
6 Hakuna mumwe muprofita munyika mavo?
7 "WeAmerica" ​​wemuJapan
8 Mambo wekushambadzira
9 Nei uchinja?
Kubva kuKyoto kuenda pasirese
Akazvarwa muna Ndira 12, 1949 muKyoto, akararama huzhinji hwehudiki hwake muKobe. Chaizvoizvo, aya maguta, pamwe neTokyo, ndeimwe yezviitiko zvinowanzoitika zvakaongororwa naMurakami kuburikidza nehunhu hwake. Nekuti zhinji dzenyaya dzake dzinotenderera chaizvo pane icho chiito: ongorora.
Iko kuda kwetsamba dzaakagara nhaka zvakananga kubva kuvabereki vake; vese vari vaviri vaiita basa rekudzidzisa mabhuku echiJapan. Pamusoro pe, kubva achiri mudiki akafuridzirwa zvakanyanya nehunhu hwekumadokero. Parizvino, basa rake rinosanganisira gumi nemana, gumi nemashanu kuunganidzwa kwenyaya, shanu dzakaratidzwa nyaya, uye mashanu zvinyorwa.
Nostalgia mubasa raHaruki Murakami
Murakami anonyudza vaverengi vake mukudzika kwakadzika. Zvinyorwa zvake zvakaumbwa nemusanganiswa wakanaka pakati peicho chaicho uye fungidziro., akarungwa nekusuruvara kukuru kuri mune dzese ngano dzake. Naizvozvo, nhoroondo dzake dzakanyanya kushushikana, zvine mhosva huru yemanzwiro mumutsara wega wega.
Muenzaniso: Kafka paMahombekombe
Unogona kutenga bhuku pano: Kafka pamhenderekedzo
Nemabhuku aMurakami, vaverengi vanoona zvinoitika zvevatambi vake sekunge vari munyama yavo. Mavari, dzimwe nguva zvinonetsa kuona mwenje wetariro pakati pemafungiro mazhinji ane makore. Kafka pamhenderekedzo (2002) - kune mazhinji basa rakanakisa remunyori- rinobatanidza zvese nhoroondo zvinotaurwa pamusoro.
Avo vane bhuku mumaoko avo havasi chete zvapupu zvezvinoreva kusiiwa. Kwete. Asi ivo vanonzwawo kurasika munyika yekusangana uye kusanzwisisana nevatambi vari kuruka, vasingazive, nhamo yemunhu mukuru. Iyo zano rakapetwa zvinehunyanzvi rakapindirwa nenzira ine hungwaru naMurakami haipe truce mune chero mutsetse.
Hupenyu hwaKafka Tamura hwakamirira muverengi nostalgically muchitsauko chimwe nechimwe chisinganzwisisike, apo nyaya yaSatoru Nakata yakavamirira vari vaviri vaviri. Zvese zvine hungwaru zvakazvirova kusvika nzira dzadzo, dzisingamiswe, dzinoenderana.
Asati uye pashure Tokyo Blues
Unogona kutenga bhuku pano: Tokyo Blues
Tokyo Blues (1986) haisiriyo bhuku rake rekutanga, zvisinei, kuburitswa kwayo kwakavhura misuwo yekudyidzana nedzimwe nyika. Inomiririra zita rekutsvenesa, iro rakamutendera kuti azvizivise kuJapan uye munzvimbo zhinji dzenyika. Yakatengesa zvakanyanya zvekuti mitezo yaive yakakwana kugara nemukadzi wake Yoko, kutanga muEurope uyezve kuUnited States.
Zvinoshamisa munyori pachake akamboreurura kuti paakanyora, kupokana kwake kwaive kwechokwadi. Mabasa ake apfuura - akabuditsazve nekuda kwekubudirira kwebhuku rino, iro rinozivikanwa se ChiNorway Wood- pamwe nekuwanda kwekuburitswa kwake kwakatevera, ivo vakatendeka zvakanyanya kune "classic Murakami maitiro". Iyi yakasarudzika fomu yerondedzero inogona kutsanangurwa se "kurota fungidziro".
Iye munyori chaiye, asi haasiye zvimwe zvekunyepedzera maficha. Vhura Tokyo Blues, Murakami akanyudzwa mune yakadzika zvishuwo. Zvakaenzana, ehe, munyori anoongorora manzwiro ane hukama senge kushushikana uye mhosva. Kushandiswa kweshoko rechirungu neapo mumusoro, hazvisi nekuda kwevara rebhuruu. Muchokwadi, zvinokonzerwa ne "kusuruvara" kwemhando yemimhanzi, ndiwo maratidziro ari kunongedzwa nemunyori.
Mazhinji mafeni uye yakaenzana nhamba yevavengi
Mabhuku ake anochengeta vatsoropodzi uye neruzhinji ruzhinji rwakakamurwa kuva mapoka maviri akafanana nehukuru. Zvakanaka Haruki Murakami ndomumwe weavo maartist anodanana kana kuvengana. Nekudaro, vese vatsoropodzi vezvinyorwa vanoita sevanochengeta chishuwo chisingarambiki chekutaura maonero paari. Inodakadza kana kuti kwete ... hazvina basa, zvisinei kuti wakaverenga zvishoma here kana kuti hapana kana chinhu cheayo akakura katarogu.
"Dambudziko" (kujekesa makotesheni) kunokonzerwa nezvakataurwa zvirimo mune dzimwe nyaya dzake. Mavari, muganhu pakati peiyo yakanakisa neiyo cheesy haina kuratidzwa ne "mutsvuku mutsvuku". Chaizvoizvo hombe pingi chigamba kusvibisa zvese zvinosvika.
Hakuna mumwe muprofita munyika mavo?
Zvichida uko chimiro chake chinogadzira hurukuro zhinji chiri muJapan. Mamwe mazwi asingabvumirwe anomupomera mhosva yekuzvishongedza nekushongedza mufananidzo wekunyepedzera wenyika yake, pasina kupokana nemafungidziro aripo kuMadokero. Ehe, kunzwisisa neWest chete iyo "yakapfuma" Europe (England, Germany, France) pamwechete neUnited States.
Ukuwo, inobvunzwa yakawanda (inenge sejoko rakaipa) kuti anoonekwa seanoburitsa zvakanyanya mabhuku echiJapan yemakumi emakore apfuura. Aya maonero akashata anoonekwa neakakwira huwandu hwe "kumadokero" mareferenzi aripo mubasa rake.
Murakami haana kumbovanza kuyemura kwake mimhanzi yeAnglo-Saxon, kunyanya ye The Beatles (saka rimwe zita remusoro we Tokyo Blues). Nekudaro, kuonga kwake kwekuzvidza (kwakaratidzwa kakawanda) kwemapoka akaita saDuran Duran ane nharo. Saizvozvo, simba reHollywood cinema rinoonekwa mune yavo nyaya.
Chekupedzisira, uye tichisiya kunze chero kwekufunga kwekufunga, Murakami ndomumwe wevanyori uyo anonyanya kuziva maitiro ekushandisa zvakanakira kushambadzira kwemazuva ano. Kuvhurika kwega kwega kana kutangazve chero zvinyorwa zvine siginecha yako zvinoitika painternet kwemavhiki kana mwedzi. Mhedzisiro yezvehupfumi inoshamisa zvechokwadi.
Zvakwana kutongwa? Haikwanise munyori akanaka kuve anotengesa zvakanyanya? Aya marudzi emakwikwi anowanzoitika mazuva ano. Mune ino chaiyo kesi-uye mune vamwe vamwe, saPaulo Coelho, semuenzaniso-, pkana nguva kushomeka kwekunyepedzera kunoonekwa kana uchisvisvina "hanzi inoisa mazai egoridhe".
Icho chirevo chemitambo uye bhizinesi: kuhwina mafomula haana kuchinjwa. Zvirinani kwete chero bedzi ivo vachigara vachishanda uye vachiita purofiti. Pakupera kwezuva, vavengi anogara akakosha mukuenzanisa uku. Oscar Wilde atozvitaura kare: Chinhu chete chakaipisisa kupfuura kutaurwa nezvacho kusiri kutaurwa nezvacho. Iyo inoshandura: chinhu chega chakaipisisa pane kutaurwa pasi kusiri kutaurwa nezvacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Haruki Murakami
Sarah Lark Mabhuku